နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန - Yangon Media Group
နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၁၄ – မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ထူထောင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ယနေ့ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ M-Gallery Hotel ဧရာဝတီခန်းမ၌ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသော ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဦးသောင်းထွန်း၊ ဦသန့်စင်မောင်၊ ဦးသိန်းဆွေ၊ ဦးအုန်းမောင်နှင့် ဦးကျော်တင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွတ် ဝီနိုင်း၊ နေပြည်တော် ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း၊ မြန်မာန်ိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Jukr Boon-Long ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ အထူးဖိတ်ကြားထားသူများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ၌ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ချစ်ခင်ရင်းနှီးသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သကဲ့သို့ ဒေသတွင်းအရေးအပါဆုံး မိတ်ဖက်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံသည် ကီလိုမီတာ ၂၄၁၆ မီတာထိစပ်နေပြီး သံတမန်ဆက်ဆံရေး စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၂၄ ရက်မှစပြီး နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါကြောင်း။
နှစ်(၇၀)အကြာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကာလအတွင်း မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံသည် ပြဿနာများကို အပြန်အလှန် ချစ်ကြည်မှု၊ နားလည်မှုနှင့် လေးစားမှုများကို အခြေခံကာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါကြောင်း။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် မိမိနေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဦးဆုံး သွားရောက်ခဲ့သည့်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် မိမိတို့ အစိုးရသစ် တာဝန်ယူသည့်အချိန်တွင် ပြည်ပ ခရီးစဉ် တရားဝင်ခရီးအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါ ခရီးစဉ်နှစ်ခုစလုံး တွင် မိမိအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ပြည်သူများ၏ နွေးထွေးမှု၊ ကြင်နာမှု နှင့် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုတို့ကို လက်တွေ့ ခံစားခဲ့ရပါကြောင်း။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် မိမိ၏ တရားဝင်ခရီးစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချာနှင့် အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ခံစားရမိပါကြောင်း။
မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာ သည်ဟူသည့် အချက်သည် အမှန် တကယ်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအကြား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ရှိရင်းစွဲ နားလည်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုတို့ကို ပိုမို ခိုင်မာ လာစေပါကြောင်း။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် သန်းချီသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ အား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ပေးအပ်နေပါကြောင်း၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံ
သည် လုံခြုံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကျိုးရှိသော လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကို အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ၏ နားလည်မှုနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါ ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုသည် ပိုမိုခိုင်မာ ကျယ်ပြန့်လာမည်ဟု မိမိတို့ ယုံကြည် ပါကြောင်း။
မိမိတို့အနေဖြင့်လည်း လိုအပ်သည့်အချိန်တိုင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီရန် အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရေဘေးဒုက္ခသည်များ၏ အရေးကိစ္စတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ နည်းပညာရှင်များနှင့် လိုအပ်
သည့် အကူအညီများကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရေဘေး
အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရ၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသည့်အနေဖြင့် ဘတ်သုံးသန်းလှူဒါန်းခဲ့သည့် အပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်းက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျောင်းသား ၁၃
ယောက်အား ဂူအတွင်းမှ ကယ်ဆယ်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ရင်းစေတနာအမှန်ဖြင့် ကူညီပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါကြောင်း။
ထိုကဲ့သို့ နားလည်မှုနှင့် စေတနာအရင်းခံများသည် မိမိတို့၏အိမ်နီးနားချင်းပီသသည့် ဆက်ဆံရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အမြဲတစေ ကူညီပံ့ပိုးမှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
အာဆီယံဒေသတွင်း သာမက နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းတွင်ပါ ခိုင်မာသည့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံ ထူထောင်ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆက်ဆံ ရေးကြောင့် ဒေသတွင်း တိုးတက်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်စေခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ဆက်ဆံရေးအလားအလာများကို မြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများကို အတူတကွ ရင်ဆိုင်ရင်းဖြင့် ယင်းစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်မည့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနေပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွတ် ဝီနိုင်းက မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံမှုသည် နှစ်(၇၀) ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများအဖြစ်သာမက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအဖြစ်လည်း တည်ရှိနေပါကြောင်း၊ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ကိစ္စရပ်များကို ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ နားလည်မှုတို့ကို အခြေခံကာ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် မိမိအနေဖြင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပြည်သူဗဟိုပြု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အနာဂတ်နှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွတ် ဝီနိုင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်များသည် ဂုဏ်ပြုညစာကို အတူတကွ သုံးဆောင်ကြသည်။
ဂုဏ်ပြုညစာ သုံးဆောင်နေစဉ်အတွင်း မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု အကအဖွဲ့များက ရိုးရာအဆို၊ အကများဖြင့် ဧည့်ခံဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွတ် ဝီနိုင်းတို့က မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု အကအဖွဲ့များအား ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းများ ပေးအပ်ကြသည်။
ပရီးမီးယားလိဂ် လစာအများဆုံးဂိုးသမားအဖြစ် ဒီဂီယာကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ရန် မန်ယူအသင်?
စပ်ဆေးရောင်းချသူများနှင့် အွန်လိုင်းတွင် သန္ဓေဖျက်ချဆေး ရောင်းသူများကို အမျိုးသားဆေးဝါး ဥ
တတိယပင်လုံအစည်းအဝေးတွင် သဘောတူညီချက်အားဖြင့် ၁၄ ချက်ခန့် ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေ?